Semalt: Tilmaamaha SEO
Sida aan ognahay, habka ugu wax ku oolka badan ee xayeysiinta ayaa ah in kor loo qaado alaabada iyo adeegyada iyada oo loo marayo internetka. Maanta, Suuragal maahan in la helo shirkad aan lahayn degel ganacsi, maadaama ay tani tahay shuruudaha ugu weyn ee ganacsiga. Laakiin lahaanshaha bog ma dammaanad qaadi karo guusha iyadoon la dallacin. Dhiirrigelinta websaydhadu waa hawl adag, oo ay fulin karto oo keliya shirkad xirfadleyaal SEO ah. Waligaa ha aaminin websaydhkaaga kuwa khamaarka ah ee xitaa aan xallin karin dhibaatooyinkooda. Kordhinta SEO sida adeeg xayeysiin degel waxaa xaq u leh Semalt. Xaqiiqdii, Semalt ma aha oo kaliya kobcinta SEO laakiin sidoo kale waa tallaabo istiraatiiji ah oo loogu talagalay kobcinta ugu dambeysa.
Milkiileyaasha waayo-aragnimada leh ee goobta ayaa isku dayey inay la shaqeeyaan websaydhyadooda kaligood ama aaminaan kuwa dab-damiska ku dhex jooga goobtan. Sidaas darteed, ganacsigoodii wuu baaba'ay. Iyo xaalad kasta oo sidaas ah, dadku waxay ka baryeen Semalt inuu badbaadiyo websaydhyadooda, mana diidin. Waxaan macno ahaan uga soo saarnay barahooda waxayna ku riixeen jagooyinka ugu sareeya mashiinka raadinta. Waxaad ku fiicnaan laheyd inaad ku aqriso kiisaskan degelkeena, ooy kujiraan jawaab celin fiican kumanaan macaamiil ah. Semalt wuxuu leeyahay waayo-aragnimo ballaaran iyo xirfad-xirfadeed aad u sarreeya wuxuuna ula tacaali karaa hawsha wixii murugsan. Waxaad ku guuleysan kartaa kobcinta SEO, laakiin kaliya haddii aad ku sameyso Semalt.
Iyada oo aan la jabin tikniyoolajiyadda SEO-ga ah, ma gaari doontid natiijada la doonayo. Si kastaba ha noqotee, guusha kuma xirna oo keliya adeegsiga nooc farsamo ah. Waa muhiim in lala socdo waqtiyada lana hagaajiyo qorshayaasha kor u qaadista. Semalt wuxuu si joogto ah u horumarinayaa habab cusub oo lagu kobcinayo bogagga internetka, iyadoo lagu dabaqayo teknoolojiyad casri ah. Shirkaddu waxay isu aasaasay inay noqoto hogaamiyaha hormarinta SEO-ga iyo shirkad caalami ah oo caan ka ah horumarinta shabakada.
Kooxda Semalt waxay ka kooban yihiin aqoonyahanno heer caalami ah oo ku takhasusay dhammaan takhasusyada. Khabiir kasta wuxuu ku hadli karaa dhowr luqadood wuxuuna leeyahay khibrad badan oo ku saabsan kobcinta SEO. Kuwani waa maareeyayaal khibrad leh, khabiiro SEO ah oo aqoon u leh, khabiiro IT-ga, iyo kooxda qorayaasha kartida leh. Ka sokow, naqshadeeyayaasha dhaadheer ayaa sidoo kale ka shaqeeya kooxda. Kahor intaadan dooran xalka istiraatiijiyadeed, khubaradu waxay tixgeliyaan dhammaan sababaha saameeya hufnaanta kor u qaadista websaydhka. Goob kasta waa mashruuc cusub oo u baahan qaab shaqsiyeed iyo qaab kor u qaadis.
Dhiirrigelinta SEO-ka ee websaydhka ee matoorada raadinta ayaa ku habboon ganacsatada badankood oo soo bandhiga badeecadooda ama adeegyadooda internetka. Tani waa hab wax ku ool ah oo xidid loogu raadiyo mashiinka raadinta waqti dheer isla markaana si joogto ah loo kordhiyo tirada dadka soo booqda. Kordhinta Mashiinka Raadinta (SEO), marka loo eego qaab fudud, waa qaab hawleed kor u qaadida gudaha iyo dibedda ah oo loogu talagalay in lagu hagaajiyo booska websaydhka mashiinka raadinta. Marka, si loo soo dejiyo, websaydh si fiican loogu kala saari karo matoorada raadinta, waxay u baahan tahay in loogu shaqeeyo qaab adag.
Haysashada degelku macno malahan iyada oo aan la dallacin. Isuduwaha la'aan, taraafikada kheyraadka waxay noqon doontaa mid aad u hooseysa ama eber haddii aan la isticmaalin habab kale oo soo jiidashada taraafikada ah. SEO wuxuu ku haboon yahay qofkasta oo iibinaya alaabooyinka internetka, raadinaya macmiil, shuraako, iwm. Kor u qaadida raadinta iyo sare u qaadida websaydhada ayaa si joogto ah u kobcaya. Qiimaynta algorithms-ka ayaa sii fiicnaanaya, adeegyada falanqaynta cusub ayaa soo ifbaxaya sidoo kale raadraaca natiijooyinka shaqooyinka la qabtay ayaa dhacaya. Semalt wuxuu kaalin weyn ka ciyaaraa horumarinta nidaamka kobcinta SEO.
Dhiirrigelinta SEO-ga ee websaydhka ee matoorada raadinta waxaa ku jira saddex aag oo muhiim ah: dibedda, kobcinta gudaha, iyo iibsashada gorfaynta. Jihada kasta waxay ka kooban tahay ficilo kaladuwan oo u baahan in loo fuliyo isku xigxig gaar ah. Thanks to sano oo waayo-aragnimo ah oo ku saabsan hagaajinta kobcinta websaydhka, Semalt wuxuu bixiyaa xalal cakiran sida AutoSEO, FullSEO, iyo baaraha gaarka ah ee barta internetka. Oroditaanka ololahan ayaa dammaanad ka qaadaysa kor u deg deg ah jagooyinka ugu sareeya mashiinka raadinta. Hoos uga fiirso mid kasta oo ka mid ah.
Inta badan milkiilayaasha websaydhada ayaa si buuxda kalsooni ugu qaba in AutoSEO ay tahay xalka ugu fiican ee loogu wareejin karo websaydhka jagooyinka ugu sareeya mashiinka raadinta. Maaha si shil ah, maaddaama tirada isticmaaleyaasha ku guuleystey ololahan ay si xawli ah u koraan. AutoSEO waxaa ku jira dhowr marxaladood oo tallaabo khasab ah oo lagu sameeyo is dhexgalka joogtada ah ee takhasuska Semalt. Khabiirada shirkadda ayaa waliba qaadaya mas'uuliyadda natiijada guuleysatay. Habka, qaabeynta websaydhada ayaa loo badali doonaa iyadoo loo eegayo shuruudaha kobcinta. Dhiirrigelinta mashiinka raadinta ayaa shaki la’aan ah inuu guuleysan doono. Waa kuwan shaqooyinka ugu waaweyn ee loogu talagalay AutoSEO:
xulashada ereyada muhiimka ah ee habboon;
Ololaha AutoSEO wuxuu bilaabmayaa isla marka aad iska diiwaan geliso degelkeena. Falanqaynta websaydhadu waxay bilaabmaysaa inay sii socoto, isla mar ahaantaana waxaad heli doontaa warbixintii ugu horraysay ee ku saabsan heerka goobtaada mashiinka raadinta. Inta badan, khaladaad ayaa ka dhici kara qaab dhismeedka websaydhka, sidaa darteed injineerkeena SEO wuxuu si taxaddar leh u hubiyaa qayb kasta oo ka mid ah websaydhka. Marka khaladaadka la aqoonsado, waxaad heli doontaa warbixin faahfaahsan, oo injineerada SEO ayaa tirtiri doona. Inta badan qayb kama lihid howlaha, laakiin had iyo jeer la soco wixii kasta ee dhacaya. Kadib markii khaladaadka oo dhan la saxo, furayaasha saxda ah ayaa la dooran doonaa. Wejigan ayaa inta badan loogu talagalay in lagu wanaajiyo taraafikada websaydhada.
Tallaabada xigta waxay noqon doontaa xulashada xiriirada internetka. Xiriirimahaan waxaa loogu talagalay in lagu sii geliyo ilaha internetka. Sababtoo ah mashiinka baaristu wuxuu dafirayaa waxa aan macnaha lahayn, waxaa muhiim ah in laga dhigo mid laxiriira oo macno leh. Howlaha takhasuska Semalt ayaa ah in la xusho ilaha ay quseyso si loo geliyo xiriiriyeyaasha. Maamulaha shirkadda ayaa shaqsi ahaan u fiiriya ficilada khabiirka, sidaa darteed wax waxyeelo ah oo ku soo kordha shabakadaada weligaa ma dhici doontid. Degelkaaga ayaa gabi ahaanba amaan ah.
Hadda waxaan u baahanahay inaan sameyno isbeddelada loo baahan yahay websaydhka. Maamulaha Semalt wuxuu u shaqeeyaa sidii la-taliye dibadeed wuxuuna talo ka bixiyaa tafatirka farsamada. Warbixin kale ayaa muujineysa waxa isbedelada ay tahay in loo sameeyo kor u qaadista wax soo saarka leh. Xeel-dheerayaashu waxay adeegsadaan marin u-helidda (Faylasha Transfer Protocol) FTP. Helitaanka FTP waxaa looga baahan yahay jawaab deg deg ah oo ku saabsan mashiinka raadinta isbedelada si loo sameeyo hagaajinta lagama maarmaanka ah. Maaddaama darajooyinka ay si joogto ah u cusbooneysiiso, Semalt ayaa kugu wargalinaya isla markaana soo bandhigaya ereyada furaha ah. Erayada furaha waa inay u dhigmaan waxa ku jira, waxaa xukuma khabiirka sidoo kale. Waxa kaliya oo ay tahay inaad sameyso waa inaad fiirsato oo aad diiwaangeliso natiijooyinka wanaagsan. Qiimaha billaha ah ee loo wado AutoSEO waa $ 99.
Sidee fullSEO u shaqaysaa
Semalt wuxuu bixiyaa ololaha FullSEO, kaas oo dammaanad ka qaadaya kor u qaadida guusha ee shabakada waqti gaaban. Ololaha waxaa ku jira kobcinta websaydhka gudaha iyo gudaha. Hawlaha oo dhan waxay ka kooban yihiin dhowr marxaladood oo khasabka ah. Dhamaadka labada marxaladood, qiimeynta ayaa si aad ah u sarreysa. Sida ololaha kale ee Semalt, FullSEO waxaa maamula kormeerka maareeyaha, ficilada oo dhan waxaa sameeya takhasusle. Si dhakhso ah, waxaad ogaan doontaa in shabakadaada ay soo dhowaaneyso jagooyinka mashiinka raadinta ugu dhakhsaha badan. Waa in la ogaadaa in tartamayaashaadu aysan sii wadan karin booska websaydhkaaga.
Si aad u bilowdo ololaha, waxaad u baahan tahay inaad iska diiwaangeliso bartayada internetka. Markaad isqorto, websaydhkaaga ayaa bilaabaya in si toos ah loo lafaguro. Dhamaan ficilada lagu sameeyo marxaladan ayaa lagu gartaa kobcinta gudaha. Waxay kujirtaa dhowr tillaabo oo ku saabsan hubinta qaab dhismeedka websaydhka. Waxaad heli doontaa warbixin natiijooyinka falanqaynta iyo liistada khaladaadka laga helay dhismaha goobta. Khaladaadka oo dhan waxaa sixi doona khabiir ku xeel dheer SEO, sidaa darteed maahan inaad wax sameyso. Marka xigta, khabiirka SEO-ga ee salka ku haya xogta ka soo baxda warbixinta ayaa qeexaya xudunta asaasiga ah. Kobcinta gudaha, xulashada ereyada muhiimka ah ee laxiriirta mowduucaaga iyo sida loo kala qeybiyo bogagga shaqsiyaadka waa mid aad muhiim u ah. Kaliya ereyada furaha ee saxda ah ayaa kobcin kara taraafikada bogga. Helitaanka FTP waxay ka caawineysaa khabiirka inuu sameeyo isbedelada lagama maarmaanka u ah websaydhka.
Tan ku xigta waa kobcinta dibedda. Waxay macnaheedu tahay ka shaqeynta isku xirnaanta iyo buuxinta agabyada wanaagsan. Waa inaan fahamnaa waxa xiriiriyeyaasha sida ugu wanaagsan ugu shaqeeya matoorada raadinta. Tani waa hawsha khubaradeena. Waxay sidoo kale si taxaddar leh u baarayaan waxa ku jira. Waa inay si adag u waafajiso macnaha ilaha ay ku xirnaandoono xiriiriyeyaasha. Qodobkaan ayaa loo tixgelin karaa midka ugu muhiimsan.
Semalt wuxuu la shaqeeyaa goobo badan oo la isku halleyn karo, sidaa darteed wax dhibaatooyin ah ma jiri doonaan inta lagu jiro marxaladan. Xirfadlayaashu waxay dooran doonaan ilaha leh waxyaabaha ugu habboon ee waafaqsan shuruudaha SEO. Markaad gasho xiriiriyeyaasha websaydhadaas, waxaad filan kartaa horumar hor leh. Warbixinada xilliyeedka ayaa kula socodsiinaya isbadalada goobta iyo kobcinta qiimeynta. Waxaad ku luglahahay ololaha adigoo ah goobjooge, laakiin waxaad heli kartaa macluumaad kasta. Xeel-dheerayaashu way kula soo xiriirayaan had iyo goor.
Haddii lagugu qasbay inaad joojiso kor u qaadista xayeysiinta SEO, ma keeni doonto dhibaato badan. In kasta oo Google ay ka saarto dib-u-celinta dib-u-keydinta keydka macluumaadka muddo bil gudaheed ah, qiimeynta hoos uma dhici doonto. Booska qiimeynta wuxuu kusii nagaan doonaa heer gaar ah, Thanks to the fullSEO ololaha. Heerku wuxuu noqon doonaa mid aad uga sarreeya sidii uu ahaa ololihii ka hor. Qiimaha FullSEO wuxuu kuxiran yahay arrimo badan, oo badanaa la xiriira gobolka boggaaga. Qiimaha ugu dambeeya waxaa magacaabi doona ka dib kormeerka barta internetka ee khabiirkeena SEO iyo gabagabadiisa. Kharashyadu waa inaanay kaa cabsi gelin maxaa yeelay dakhliyadu had iyo jeer way ka sarreeyaan kharashaadka Semalt.
Marka laga hadlayo isbeddelada waaweyn ee ka dhex dhaca makiinadaha raadinta, aad ayey u adag tahay in lagula dagaallamo qiimeynta isku xirka. Xitaa way adagtahay in la aqoonsado qodobbada muhiimka ah ee kharash garaynta kaas oo qofku hubin karo tayada horumarka Kheyraadka. Farsamadihii hore ayaa lumiyay muhiimadoodii, hababka cusub ee xayeysiinta ayaa wali ah kuwo aan la hubin. Iyada oo aan la samayn falanqayn ujeeddo ah, suurtagal ma ahan suurtagal in la gaaro natiijada la rabo ee dalacsiinta. Waa sababtaas awgeed Semalt wuxuu abuuray nidaamka gaarka ah ee falanqaynta ee loogu talagalay in lagu garto khaladaadka farsamo ee websaydhka iyo hagaajinta. Hawlaha ugu waaweyn ee Falanqaynta ayaa ah:
Falanqaynta ayaa ogaata khaladaadka suurtagalka ah ee ku-habboonaynta goobta oo isla markiiba calaamadaha tan. Laakiin maahan ujeedada kaliya. Nidaamku wuxuu si taxaddar leh u hubiyaa waxyaabaha ka kooban websaydhka iyo cabirka farsamada. Waxay falanqeeysaa websaydhyada tartamayaasha, iyagoo qiimeynaya awoodooda tartan. Si aad u bilowdo ururinta falanqaynta, waxaad u baahan tahay inaad iska diiwaangeliso websaydhkeenna. Warbixinada xiga waxay muujinayaan booska websaydhka mashiinka raadinta iyo sidoo kale booska tartamayaashaada. Isticmaalida macluumaadka laga helay warbixinnada, khubaradeenna ayaa sameeya isbeddelada loo baahan yahay iyagoo tixgelinaya heerarka SEO-ga.
Lahaanshaha akoon ansax ah ayaa ku siinaya xoogaa faa'iidooyin ah. Waxaad ku dari kartaa nambar kasta oo websaydhada dhinac saddexaad ah golahaaga khaaska ah. Bogagga websaydhka ee aad ku dartay waxay bilaabaan in si otomaatig ah loo falanqeeyo intaad helayso warbixin leh xogta faahfaahsan. Qalabka raadinta ayaa si joogto ah u cusbooneysiiya algorithm-ka, sidaa daraadeed kaliya falanqeeyayaashayada ayaa awood u leh inay isbeddelada saxda ah ku sameeyaan websaydhka. Falanqaynta faahfaahsan waxay suurtogal ka dhigaysaa in la garto ereyada muhiimka ah. La'aan la'aan Falanqaynta, suurtagal ma ahan in la doorto ereyada furaha ah ee ku habboon waxyaabaha ka kooban websaydhka. Xulasho ahaan, dabcan, waxaad ku dari kartaa ereyo fure oo kala duwan ama tirtiri kara kuwa aan loo baahnayn. Muhiimadu waxay tahay, aasaaska aasaasiga ah ee ereyada furaha ee loo baahan yahay ayaa horay loo galay. Nidaamkan ayaa si aan macquul ahayn u saameyn doona koboca dhaqsaha taraafikada.
Xog ururinta falanqaynta ayaa la soo ururiyaa saacad kasta. Ku lug lahaanshahaagu waa in la helo warbixinnada hawlgallada iyo hagaajinta natiijooyinka togan. Waad hubin kartaa in ficiladu ay sax yihiin mashiinka raadinta. Natiijooyinka ayaa ah kuwo la yaab leh: waxaad runtii aragtaa booska ugu sarreeya ee websaydhkaaga. Waxaa intaa dheer, tartamayaashaada kama dambe bixi karaan mashiinka raadinta. Waxaan kugula talineynaa adeegsiga Barnaamijyada Codsiga ee Isweydaarsiga Codsiyada, kaas oo si otomaatig ah xogta u wadaagga. Adigoo aan sameyn wax dadaal ah, waxaad kula socon doontaa cusbooneysiinta hadda. Adeegga falanqaynta waxaa ku jira saddex baakado oo waaweyn oo kharash kala duwan leh:
Semalt waxay sidoo kale bixisaa xalka guud ee horumarka webka. Khubaradeenna ayaa qaabeynaysa degel ganacsi iyada oo la raacayo qeexitaanka dadka dhageysta bartilmaameedka iyo himilooyinka mashruuca, waxay horumariyaan qaabeyn u waafajin gaar ah, barnaamijka barnaamijka. Waxaan ku dhafannaa qaybaha shabakadda barnaamijyada qaybaha saddexaad iyo Nidaamka Maareynta Waxyaabaha, aan u habaynno qaab-dhismeedka e-commerce iyo API-yada.
Soo-saarista Fiidiyowga Fiidiyaha
Ganacsi kastaa wuxuu higsanayaa inuu ka iibiyo badeecadiisa ama adeegyadiisa dhagaystayaasha bartilmaameedka ah. Suuqa waa weyn yahay oo way fududahay in laga lumiyo tartamayaasha haddii aadan u sheegin kuwa wax iibsada iyo macaamiisha suurtagal ah oo ku saabsan dalabkaaga. Xayeysiintu way ka duwanaan kartaa, laakiin Fiidiyaha fiidiyaha ah ayaa loo arkaa inuu yahay midka ugu waxtarka badan. Waxay saameyn ku yeelan kartaa shucuurta ka badan qaababka kale. Taasi waa sababta Semalt u soo bandhigeyso adeeg gaar ah oo loogu talagalay abuurista fiidiyow gaar ah. Waxay iftiimin doontaa dhammaan faa'iidooyinka shirkaddaada waxayna ku keeni doontaa gaadiid badan boggaaga. Waxaad u dooran kartaa qaabka fiidiyowga ah qaab shay ah ama waxaad ku dalban kartaa ikhtiyaarkaaga dookhaaga. Fiidiyaha xayeysiinta ah ee Semalt wuxuu soo jiidan doonaa macaamiil fara badan wuxuuna ganacsigaaga ka dhigi doonaa mid barwaaqo.
Isku soo wada duuboo dib u eegista shirkadeena, waxaan kugula talin karnaa inaadan ka fikirin waqti dheer meesha aad u tageysid kobcinta shabakada. Jawaabtu waa mid si muuqata u muuqata. Qoraalka waxaan u gelin qaab yar oo ka duwan. Semalt wuxuu sameeyaa wax kabadan oo kaliya xayeysiinta websaydhada, wuxuu dadka ka dhigaa mid hodan ah kobcinta SEO. Guushaadu waa sumcaddeena. Nala soo xiriir, annaga waxaan diyaar u nahay inaan qaadno mas'uuliyadda badnaantaada.